Podcast 1x31 an'ny Actualidad iPad: Apple Music, Apple Watch ary bebe kokoa | Vaovao IPhone
Herinandro iray hafa dia miverina miaraka amin'ny podcast izay hamakafakana ny vaovao rehetra momba an'i Apple sy ny fitaovany. Ny Betas vaovao an'ny iOS 9, watchOS 2 ary El Capitan, ny resabe nifanaovana tamin'ny Apple Music, ilay Apple Watch 2 vaovao ho an'ny 2016 ary vaovao maro hafa miaraka amin'ny lohahevitry ny herinandro sy ny fampiharana izay amporisihanay ny hisintona amin'ity podcast ity. Halahelo azy ve ianao?
4 Hiran'ny herinandro
Hanandrana ny Apple Music ve ianao?
AC / DC Big Gun ao amin'ny lisitry ny Spotify
Henoy »1 × 31 iPad Podcast Vaovao: Apple Music, Apple Watch ary bebe kokoa» amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » 1 × 31 Podcast an'ny Actualidad iPad: Apple Music, Apple Watch ary maro hafa
Iza no anaran'ny fampiharana amin'ny herinandro?
Afaka mametaka rakitra avy amin'ny Google Drive mankany amin'ny Kalandrie Google isika izao
TaiG dia namoaka fanavaozana ny jailbreak ho an'ny iOS 8.3 (havaozina)